AHOANA NO HAMADIHANA DVD AMIN'NY WINDOWS 10 MAIMAIM-POANA (AMBOARY NY DVD TSY MILALAO OLANA) - MALEFAKA
Ahoana no hamadihana DVD amin'ny Windows 10 maimaim-poana (Amboary ny DVD tsy milalao olana)
Moa ve ianao manana fanangonana DVD tranainy misy fahatsiarovana sarobidy ary ny sasany dia tsy azo lalaovina amin'ny mpilalao DVD amin'ny solosaina? Ny iray amin'ireo olana dia mety tsy ampy DVD decoder. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny manova azy ireo ho endrika nomerika. Raha efa simba ny DVD sasany tianao holalaovina dia mety hahazo a fahadisoana mamaky rehefa ampidirinao ao anaty solosaina ny kapila. Tsy midika akory izany fa tsy afaka mandika ilay kapila ianao, mila DVD ripper ianao izay manampy amin'ny fandrodanana sy fandikana izay kapila DVD, sary ISO, na lahatahiry DVD amin'ny kapila mafy. Misy maromaro maimaim-poana DVD rippers misy fanampiana hanesorana angona avy amin'ny DVD ho endrika hafa. Eto izahay misolo tena WinX DVD Ripper Platinum ny DVD ripper tsara indrindra hita eny an-tsena, tsy vitan'ny hoe RIP DVD amin'ny endrika nomerika manohana koa DVD voaaro ary afaka mamadika azy ireo ho MP4 ho an'ny endrika hafa.
Matetika, DVD Ripper dia rindrambaiko rindrambaiko, ampiasaina handikana ny votoatin'ny DVD amin'ny kapila mafy. Ary koa manova ny angon-drakitra ao amin'ny DVD ho endrika hafa mba hahafahan'ny horonan-tsary milalao amin'ny fitaovana tsy mahazaka DVD. Saingy ny sasany amin'ireo DVD rippers maimaim-poana dia tsy afaka manohana ny endrika rakitra rehetra, maka fotoana ela handrodana DVD, sy ny maro hafa. Miresaka momba ny WinX DVD Ripper Platinum Na inona na inona ny loharanonao dia kapila DVD ara-batana, sary DVD ISO, na lahatahiry DVD, ity DVD ripper tsara indrindra mamela anao hanova haingana ny DVD ho MP4, AVI, WNV, ary karazana horonan-tsary malaza amin'ny kalitao avo indrindra. Afaka milaza isika fa vahaolana tsara indrindra amin'ny fandroahana DVD vaovao, DVD misy lohateny 99, DVD fanazaran-tena, na DVD simba aza miaraka amin'ny rafitra famandrihana DVD interactive ary mekanika fanamarinana lohateny vaovao.
WinX DVD Ripper Platinum endri-javatra
Raha miresaka momba ny endri-javatra dia ity no hany fitaovana DVD ripper izay nahatratra ny haavon'ny hardware level-3.
WinX DVD Ripper Platinum no hany tokana DVD ripper izay manohana ny CPU sy ny GPU level-3 acceleration hardware amin'ny alàlan'ny fampiasana Intel QSV sy NVIDIA (CUDA) NVENC, izay tsy vitan'ny hoe manafaingana ny hafainganam-pandeha ihany no mitazona ny kalitao avo indrindra. Araka ny filazan'ny mpamorona WinX, mety haharitra 5 minitra eo ho eo ny kopia DVD iray manontolo.
Raha hitanao izany Ny DVD ezahinao rovitra dia manana fiarovana amin'ny zon'ny mpamorona na zavatra mitovy aminy , aza manahy momba izany. Ny WinX DVD Ripper Platinum dia manohana DVD voaaro ary afaka miova DVD voaaro amin'ny kopia Disney ho MP4 ho an'ny endrika hafa maimaim-poana.
Eny, misy endri-javatra hafa misy.
Afaka maka angon-drakitra avy amin'ny karazana DVD rehetra dia ahitana ankapobeny, natao an-trano, ara-barotra, antitra scratched, ISO sary, DVD lahatahiry.
Ny fanohanana ny saika malaza rehetra endrika ahitana MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPEG, MP3, TS, sy ny maro hafa.
Manohana ihany koa ny fitaovana mahazatra rehetra misy iPhone, iPad, Apple TV, Android, Samsung, Sony, sy ny maro hafa.
Mamela anao handrovitra manta DVD antontan-taratasy toy ny Video TS lahatahiry sy ny kapila sary izay DVD rippers hafa tsy manome.
Ary koa, misy tonian-dahatsoratry ny horonan-tsarimihetsika, manolotra fiasa tsotra vitsivitsy toy ny fanitsiana ny volume, ny fanampim-panazavana, ny vokatra, ny fanitarana ary ny trim.
Ahoana ny fandroahana sarimihetsika DVD amin'ny fampiasana WinX DVD Ripper Platinum
Rip DVD mampiasa WinXDVD Ripper platinum dia tsotra sy mora. Rehefa manomboka ny fampiharana ianao dia aseho amin'ny efijery menu tsotra sy azo jerena.
Eo an-tampony, amin'ny safidy, dia manana safidy amin'ny fiteny audio mahazatra izahay. Ary koa, misy safidy hafa toy ny fisafidianana lahatahiry famoahana sy safidy hanakatona na hanakatona ny PC rehefa vita ny asa.
Andao hanafatra DVD avy amin'ny kapila, Mba hanaovana izany dia tsindrio ny fizarana Disk ary tadiavo ny kapila, sary, na lahatahiry tianao horovitra.
Manaraka, dia mila mifidy izay Output profil tiantsika hampiasaina, misy ny lisitry ny malaza indrindra Output endrika ahitana endrika mifanaraka amin'ny fitaovana toy ny iPad, iPhone sy iPod, Apple TV, HTC, ary Samsung Android. Ary koa, misy safidy, azonao atao ny manala ny rakitra audio amin'ny horonan-tsary voafantina. safidio fotsiny ny tena soso-kevitra ary tsindrio ok.
Fidio ny Lahatahiry haleha izay ho voatahiry ny vokatrao horonan-tsary DVD nomerika. Tsindrio ny bokotra RUN ary miandry minitra Miankina amin'ny DVD, ny fandrindranao ary ny fitaovan'ny solosainao, mety haka fotoana kely izany.
Na ny vao manomboka sy ny matihanina aza dia afaka mahafantatra ny fomba fampiasana an'io, Eny ary misy fitaovana fanontana Video fototra azo alaina amin'ny fanitsiana ny volume, fanampim-panazavana, famafazana, fanitarana, ary trim alohan'ny hamonjena ny horonan-tsary.
Raha te hidirana amin'izy ireo dia kitiho indroa ny lohatenin'ny fikandran-tsarimihetsika misokatra miaraka amin'ny fitaovana fanitsiana.
Ny tabilao General, avelao ianao amboary ny feo , raha toa ka mangina loatra ny feo.
ny tabilao misy lohateny mamela anao hisafidy izay rindran-dohateny haseho na manampy ny rakitra dikan-teny (.srt) anao manokana. Ary raha manova ny toe-javatra ianao dia afaka mahita azy ireo ao amin'ny varavarankely preview.
Misy Tapaho sy fanitarana ny tabilao izay ahafahanao mamokatra sy manitatra. Azonao atao ihany koa ny misafidy avy amin'ny presets, misintona ary mandatsaka ny boaty manodidina, na manaova endrika maimaim-poana ary manitatra ho azy amin'ny fanapahan-kevitry ny horonan-tsary.
Misy koa Trimtab izay mamela anao hisafidy ny fanombohanao sy ny fotoana. Ity dia tsara amin'ny fisintonana clip na fanesorana ny crédit farany.
WinX DVD Ripper Platinum maimaim-poana?
Eny, manana fanontaniana ao an-tsainao ianao momba ny fomba fampahafantaranay WinX DVD Ripper Platinum maimaim-poana satria ity dia DVD ripper premium. Aza manahy eto ny WinX DVD Ripper Platinum fanomezana rohy fampidinana, aiza no azonao WinX DVD Ripper Platinum feno endri-javatra maimaim-poana tanteraka.
Fanamarihana: Ny edisiona giveaway dia manokatra ireo endri-javatra premium saingy tsy nahazo fanavaozana sy fanohanana ianao. ary tsy maintsy mividy ny vokatra ianao mba hahazoana fanavaozana sy fanohanana avy amin'ny ekipany.
ankapobeny WinX DVD Ripper platinum dia mora kokoa ny mampiasa na dia tsy manana fahalalana momba ny ripping teknika. Afaka manao backup DVD ao anatin'ny minitra vitsy ny olona rehetra. Ampidino ny fahazoan-dàlana WinX DVD Ripper Platinum fanomezana azonao atao ihany koa ny mahazo tombony amin'ny Fandresena Epson Projector. Hisintona rakitra zip miaraka amin'ny fametrahana, kaody fahazoan-dàlana ary torolàlana mpampiasa izany. Ampiasao ny rindrambaiko ary zarao ny hevitrao momba ny fanehoan-kevitra.